यस्तो के भयो बिक्रम्लाई ? भावुक हुँदै म म*रेपछि मात्र मलाई छोड्नु है भन्दै बिक्रमले भनेपछि मनुले मन थाम्न सकिनन् रोइन् धर’धरी (भिडियो) – पुरा पढ्नुहोस्……
यस्तो के भयो बिक्रम्लाई ? भावुक हुँदै म म*रेपछि मात्र मलाई छोड्नु है भन्दै बिक्रमले भनेपछि मनुले मन थाम्न सकिनन् रोइन् धर’धरी (भिडियो)
काठमाण्डौं- पछिल्लो केहि समय एता सामाजिक संजालमा भाइरल भएका बिक्रम सुनार र मनु लामाको जोडीले सहयोग पाउन थालेका छन।मिडियामा आएको केहि समय एता उनलाई सहयोग आउने क्रम बढेको छ।बिक्रम बाईक दुर्घटनामा पुगेर पुरै शरीर नचल्ने एक पिडित व्यक्ति हुन् भने उनको स्याहार गर्दै आएकी मनु उनकी श्रीमती हुन्।
सुख पाउँला भनेर एउटी आमाले निकै दुख गरेर छोराछोरी स्याहार्छिन । छोराछोरीको भविष्य हेरेर उनले दुखजिलो गर्छिन । अर्काको मेलामा जाँदा अरुले खाजा खान भनेर दिएको मकै पनि पोल्टामा बोकेर घर लिएर आएर छोराछोरीलाई खुवाउँछिन् । आफुले एक अक्षर पढेकी छैनन् तर पनि त्यस्तो दुख सहेर छोराछोरीलाई पढाउँछिन् ।
गाउँमा विपन्नताले बस्न नसकेर श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान्छन् । श्रीमानले पैसा पठाउलान् र गाउँमा ऋण तिरौंला भनेर आश गरेर बसेकी उनै श्रीमतीको कानमा पर्छ श्रीमान मलेसियामै दुर्घटनामा पर्छन । सबै पीडा सहेर छोराछोरीको मुख हेरेर बसेकी हुन्छिन् तर त्यही छोरा पनि जवान भएपछि उनै आमाले सहारा बन्नुपर्ने अवस्थाको हुन्छ । रुदै भन्छिन’बाबा आमाको यतिबेला असाध्दै याद आएको छ।
Prev९० बर्षे हजुर’बुवा लट्ठी टेक्दै सहयोग लिएर अर्च*नाको डेरामा, आमाको उप’चारको लागी अब पानी बेच्न नपर्ने ( भिडियो सहित)
Next‘बीच्च बीच्चमा’का गाएक दुर्गेश थापा पक्राउ परेपछि गायिका ज्योति मगर आक्रोश हुदै मिडियामा (भिडियो सहित)
अविरल वर्षाका कारण भक्तपुरका विभिन्न बस्ती डुबानमा, घर भत्किँदा ३ जनाको ज्यान गयो
१७ वर्ष अगाडी रवि लामिछानेले अन्तरवार्ता लिएका एक व्यक्ति मानव तस्करका नायक (भिडियो सहित)
समिक्षाको घरमा पुग्दा बहिनी झन कडा। बहीनीले गित गाउदा दिदि डान्स गर्ने हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)